Global Voices teny Malagasy » Masedonia: Lasa fomba fanao ny fankalazana ny ‘Sakura’ · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 09 Mey 2009 16:30 GMT 1	 · Mpanoratra Filip Stojanovski Nandika avylavitra
Sokajy: Japana, Makedonia, Foko sy Fiaviana, Tanora, Zavakanto & Kolontsaina
Nankalazaina tany Skopje, any Masedonia, tamin'ny 25 Aprily ny Sakura , fankalazàna isan-taona ny famelanan'ny ‘cerisiers’ izay fomba fanao any Japana. Somary taraiky kely ihany ny daty nofinidy raha ampitahaina ny tamin’ny taon-dasa  satria tsy tian’ny mpandrindra hifanindry amin’ny fankalazàna ny Paska Katolika sy ‘Orthodoxe’ tamin'ny tapa-bolana lasa.
Araka ny fombafomba natsangana tamin’ny taon-dasa, nanambara  tao amin’ny blaoginy ny hetsika i Bi [MKD] tamin’ny fampiasàna sary mahafinaritra, ary nampita  ny hafatr’  [MKD] ireo mpitoraka blaogy maro hafa, toa an-dry Volan sy Razvigor. Nanambara  [MKD] izany hetsika izany koa ny mpanoratra ny pejy fandraisan’ny Blogeraj , sehatra fitorahana blaogy voalohany any Masedonia, tamin’ny fampiasana ny iray tamin’ireo sary tahirin’i Volan. Ho fanampin’izany, nanome fanolorana tamin’ny fombany manokana i Agnes tamin’ny famoahana tononkalo mitondra ny lohateny hoe Sakura  [MKD] andro vitsivitsy mialoha.
Tao anatin’ny fandaharam-potoana, nalamin’ny Federasiona Masedonianan’ny Kendo-Iaidō  niara-niasa tamin’ny Samurai Dojo  ary notohanan’ny Tanànan’i Skopje , ny fanaovana katas -‘na ‘arts martiaux’ sy origami.
Ny ankabeazan’ireo mpitoraka blaogy nanatrika ny hetsika dia namoaka rantin-tsary na sary andrana. Niala tsiny  [MKD] mihitsy aza i Volan, izay mampiasa ny blaoginy hanoratana ‘lahatsoratra tsy ofisialy’ ho an’ny vahoaka, tamin’ny famoahana sary vitsy noho ny mahazatra, noho izy tara vao tonga teny an-toerana.
Zoriv, mpitoraka blaogy maintimolaly hafa, dia namoaka ny sariny momba ny Sakura toy ny ampahany amin’ny tatitra nataony  [MKD] momba ny fitsangatsanganana nandritra ny Sabotsy tao afovoan-tanànan’i Skopje, nampitahana ny fotodrafitrasa teo an-toerana sy ny seho ara-kolontsaina niaraka tamin'ireo mpandray anjara vahiny’.
Araka ny ambara ao amin’ny Japan@Mk blog  [MKD], dia mbola hitohy ny Sakura ny 30 Aprily, ka hisy fihetsiketsehana hatao ao anatin’ny Cultural Center CK, toy ny hira Japone, tsianjery haiku, fampirantiana ‘manga’ [sary ampiainina fijerin'ny ankizy] ary fandefasana sarimiaina Japone.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2009/05/09/2189/
 ny hafatr’ : http://razvigor.blog.com.mk/node/224547
 Federasiona Masedonianan’ny Kendo-Iaidō: http://www.kendo.org.mk/
 Tanànan’i Skopje: http://www.skopje.gov.mk/
 Niala tsiny : http://volanskopje.blog.com.mk/node/224773
 tatitra nataony: http://zoriv.blog.com.mk/node/224766